Akpụkpọ ahụ Gbanye, Multimeter Test Lead, akpụkpọ ahụ Gbanye igodo - Chun Yip
akpụkpọ ahụ Gbanye
Multimter Test eduba ná
Metal Shrapnel Gbanye
PITA akpụkpọ ahụ Gbanye
Pet Waterproof akpụkpọ ahụ Gbanye
Dongguan Chun Yip Electronic Co., Ltd bụ ọkachamara akpụkpọ ahụ mgba ọkụ emeputa kemgbe 2000, kpụrụ bụ Hongkong Zhenye Electronic Co., Ltd.
Anyị Company nwere ike oru ike na integrated mmepụta ike na ndị otu na nke injinịa oru na onye na-onwe ha imewe, sample development, ogbe mmepụta na nnukwu-ọnụ ọgụgụ na ime iji mezuo dị iche iche ahịa mkpa. Anyị na-agba mbọ na-enye nke kacha mma mma maka onye ọ bụla ahịa, na ndị kasị elu na-eri-irè ọrụ. Ngwaahịa si R & D na mmepụta, àgwà nnyocha ọ bụla nzọụkwụ anyị nwere ike akara ihe iji hụ na ngwaahịa mma ahịa anyị kpọrọ ihe.
1. 19 afọ 'na-amị akụkọ ihe mere eme na 5 afọ' ebupụ ahụmahụ. 2: Anụ na ahụmahụ na-arụ ọrụ otu: karịa 80% nke mkpara na-arụ ọrụ na anyị factory n'ihi na ihe karịrị 6 afọ. 3: Professional engineering otu ga-enye oru nkwado mmepe nzọụkwụ nke ọhụrụ oru ngo. 4. Nye onye-nkwụsị mmepụta na nzukọ ọrụ site omenala akpụkpọ ahụ mgba ọkụ na PCBA, Herọd, azụ efere wdg 5. Iji ụkpụrụ dị elu ebu ka obi sie ndị na ngwaahịa na elu àgwà ma kpọmkwem akụkụ. 6.-ụlọ 100% functionally anwale.
Anyị entrepreneurial: Scientific, siri, Ihe, Innovation. Okwukwe anyị: Ahịa mbụ, Quality mbụ, Mepụta uru.
Banana Test ebute N'ihi Multimeter, Fpc OEM akpụkpọ ahụ Gbanye, Multimeter Test Duru Pen USB , Multimeter nyocha Test Lead , Test eduba ná Pin N'ihi Digital Multimeter, Silicone Rubber Membrane,